Waxaa la aasaasay 1996, Chengdu Mind Golden Card System Co., Ltd. waa soo saare hormood ah oo ku takhasusay naqshadeynta, cilmi baarista, soo saarista iyo iibinta kaararka kaararka hudheelka RFID, Mifare iyo kaarka dhawaanshaha, Rfid Label / stickers, Contact IC chip cards, stripe magnetic koodhadhka hudheellada, kaararka Aqoonsiga ee PVC, akhristaha / qorayaasha la xidhiidha iyo alaabada Warshadaha IOT DTU / RTU.
Saldhigeena wax soo saar Chengdu Mind Internetka waxyaabaha Teknolojiyada Co., Ltd. waxay ku taalaa Chengdu, galbeedka Shiinaha oo leh wax soo saar cabirkiisu yahay 20,000 mitir murabac ah iyo 6 khadadka wax soo saarka oo casriyeysan iyo ISO9001, ROHS oo u qalma.
MIND waa wakiilka kaliya ee ALIEN ee Galbeedka Shiinaha waxaan sidoo kale lashaqeyneynaa NXP / IMPINJ / ATMEL / FUDAN mudo sanado ah.
Awooddeena sanadlaha ah waa 150 milyan oo kaararka Rfid ah, 120 milyan oo kaararka PVC ah iyo la xiriir kaararka IC chip, 100 milyan calaamadda Rfid / warqad ku dheji iyo sumadaha Rfid (sida nfc tag, keyfob, curcurka gacanta, calaamadda dharka, dharka)
Wax soo saarka MIND ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa nidaamka qufulka Hoteelka, Xakamaynta Helitaanka, Aqoonsiga Jirka, Daraasada, gaadiidka, saadka, dharka, iyo meelaha kale.
Wax soo saarka maskaxda ayaa inta badan loo dhoofiyaa USA, Canada, Europe, Aasiya oo caan ku ah farsamada gacanta heerka koowaad, tayo joogta ah, sicirka ugu tartamada badan, xirmo xarrago leh iyo gaarsiin degdeg ah
Waxaan bixinnaa adeegyo OEM oo waxaan siinnaa R&D iyo taageero farsamo. Ku soo dhawow amarrada la habeeyay.
Dhammaan alaabooyinka aan soo saarnay, MIND waxay dammaanad ka qaadaysaa bixinta waqtiga-dheer iyo muddada damaanadda 2 sano ah.
Bixi alaab tayo leh si loola kulmo macaamiishayada 'codsiyada loo habeeyay
Abuur codsiyo badan oo caqli badan
Sii wad hagaajinta kaarka caqliga badan ee la abuuray
MAANKA ayaa la aasaasay.
La beddelay: Chengdu Mind system kaarka dahabka co. ltd, waxaad diirada saartaa ganacsiga kaararka RFID.Company waxay u guurtaa dhismaha Nanguang.
Keen khadkii ugu horreeyay ee wax soo saar ee Chengdu.
Weynee labalaab miisaanka warshada, soosaarida makiinado cusub iyo awood sanadle ah oo gaareysa 80 milyan oo kaararka.
Xafiis ayaa laga soo iibsaday bartamaha magaalada: 5A CBD - Dongfang plaza.
U dhaqaaq aqoon isweydaarsi is-dhis ah: baarkinka tiknoolajiyada ee MIND, 20000 oo warshad mitir laba jibbaaran ah oo wata shahaadada ISO
Diirad saarida horumarinta ganacsiga caalamiga ah, waxsoosaarka MIND waxaa loo dhoofiyaa in kabadan 50 wadan iyo gobolada aduunka.
Soo bandhig khadka tooska ah ee waxsoosaarka rfid, dhis shaybaarka tijaabinta MIND oo leh qalab buuxa oo ay ku jiraan Voyantic Tagformance pro aaladda RFID.
MIND oo ay weheliyaan Shiinaha Mobile, Huawei iyo Sichuan IOT, ayaa sameeyay gudiga dalabka NB IOT si loo dhiso silsilad deegaanka ah oo loogu talagalay horumarinta Sichuan IOT.
Maal gasho oo sameyso Chengdu MIND Zhongsha Technology Co., waxaad diirada saartaa alaabada IOT R & D iyo wax soo saarka.
Noqo SKA 1aad ee Koonfur-galbeed ee Alibaba, kaqeybgal 5 carwada caalamiga ah ee Faransiiska / USA / Dubai / Singarpore / India.
Maalgashi khadkii ugu horeeyey ee suuq geynta Jarmalka Muehlbauer TAL15000 rfid inlay wax soo saarka baakadka ee galbeedka Shiinaha.